Offshore Bank Account Zvinodhura Kuzarura Aunti Yatsva
Offshore Bank Account Zvinodhura
Vanhu vazhinji vanovaka offshore bank accounts nekuda kwekuchengetedzwa kwemafambiro kubva kune mhosva uye nezvekuchengetedza mari. Iwe haugoni kutora drill nokuti unoda kubheta. Iwe unotenga imwe nokuti unoda gomba. Saka, isu hatifaniri kungobvunza chete, "Ndeipi mari yekugadzirisa nekuchengetedza kambani yekunze?" Tinofanirwawo kubvunza, "Ndeipi mari yekuchengetedza zvinhu, nekuchengetedzwa kwemari uye kusungirwa mari?"
Nekudaro, kwekudzivirira kwefa uye kuvanzika kwemari, mutemo wekutanga hausi wekuvhura account muzita rako chairo. Vhura iyo muzita rekambani yekushambadzira, LLC kana trust. Ngatiti zita rako ndiPat Smith. Unodzosera mari kubva kubhanga pasi mumugwagwa kuenda kuaccount yekumahombekombe yakachengetedzwa na "Pat Smith." Iyo waya yekufambisa nzira inosiya rekodhi yekureba kuti iwe une account iri kumahombekombe. Ndokusaka tichiwanzovhura maakaundi emahombekombe ebhengi pasi pezita remakambani kana matrust.
Izvi zvinowedzera kuvanzika, nokuti firi inopindira mukati uye kunze uye nezvimwewo offshore banking kushandurwa kunoitwa pasi pezita rekambani, kwete munhu wacho. Mari yekumisikidza yekuvhura akaundi yekumahombekombe account kazhinji iri pakati $ 550 kusvika $ 1,250. Izvi zvinoenderana nebhengi uye masimba. Kambani yekune offshore inowanzoita pakati pe $ 1,685 uye $ 2,495. Saka, iyo izere inowanzo kuve $ 2,235 kusvika ku $ 3,745 yevaviri.
Ndezvipi Zvakawanda Zvokukweretesa Mabhenji Aripo?
Maererano ne Quora, kune inofungidzirwa mabhandi e14,600 munyika yose sezvakanyorwa iyi. Zvisinei, mabhanki mashomanana achazarura mabhuku kune vatorwa, kunyanya avo vanobva kuU.S., UK, Canada kana kuAustralia. Uyezve, kune zvakawanda zvakasiyana siyana zvehutano hwehutano kubva kune unhu hwakanaka uye hunogutsa kuita zvakashata zvisingafadzi. Mari yako ichachengetedzwa here? Unogona kuvimba mabhengi here? Funga nezvazvo. Iyi ndiyo mari yako. Iwe unoda ruzivo rwakanaka uye rwakachengeteka rwebhengi kubva pamutsara wokutanga.
Kune huwandu hwakanakisa akachengeteka, mabhangi anopa basa guru. Asi kune mazhinji mabhangi kunze uko kuti utsvage iyo yakakodzera nekubhinha kutenderera paInternet. Nzira yakanaka yekuziva ndeye kubvunza munhu anga aripo kare; kunyanya munhu akagadzira nhoroondo dzemakungwa ezviuru zvevanhu. Saka, hira nyanzvi. Izvo zvichave zvakakosha kushoma mari kuti uzvigadzirire nguva yekutanga. Kana iwe uchida ruzivo rwakawanda pane nhamba yefoni uye fomu yekutaurirana pane ino skrini. Svitsa uye tora mukana nazvo.
Offshore banking inoda chikumbiro, nekuda kwekushingaira uye chekutanga dhipoziti kuvhiya account yako. Iko kushandiswa kunowanzoita zvakananga. Iine zita rako, kero uye nhamba dzefoni. Iwe unowanzo tepa akaomesesa fungidziro yekuti sei iwe uchifunga kuisa uye kubvisa uye rumwe ruzivo.
Chokwadi, unoda kuvanzika. Asi iwe haudi kuvanzika kwakawanda kuti mumwe munhu achinyepedzera kuti iwe ugone kufamba mubhangi uye kubvisa mari yako. Nekudaro, nekushingirira kwakakodzera, senge kopi inonyoreranwa yepasipoti yako, yekutanga utility bhajeti uye netsamba dzekutsikisa dzinodiwa. Ivo vanofanirwa kuziva kuti kana munhu akafona, emaimendi kana kufamba achipinda mubhangi kuti akumbire mari kuti ndiye chaiye. Ruzivo rwako ruchave rwechakavanzika. Asi iwe unoda kuti mari yacho iende kwauri, kwete mumwe munhu wavanoti ndiwe. Ndicho chikonzero chikuru nei vachikumbira zvitupa.
Icho chinhu chekusimba kwehupfumi kana vanhu vemunyika yako vachifunga mabhanga avo seakachengeteka uye akachengeteka. Iyi ndiyo nheyo yepasirese. Saka, iyo nyika dzepasi rese dzinouya pamwe gore rega rega muBasel, Switzerland kuti dziuye nemabhengi epasi rese. Yakawanda sei chikwereti bhangi inogona kutora mukuenzanisa nemabhangi? Mari yakawanda sei inofanira kuchengetwa paruoko? Ndeapi matanho avanotora kuti vachengetedze zviitiko zvehutsotsi uye mari yemagandanga kubuda muhurongwa?
Imwe yeanonyanyozivikanwa kumahombekombe ebhengi kutonga ndeye Cayman Islands. Pano iwe unogona kuverenga nezve Cayman kambani uye account.
Nekudaro, chimwe chikonzero nei mabhanga achida basa rakakodzera nderekuti vanoda kugamuchira "vakomana vakanaka" uye varambe vari kunze kwe "vakaipa vakomana." Unogona kuda kuvanzika. Asi iwe zvakare unoda mari yako yakachengeteka uye inowanikwa. Nekudaro, iwe haudi kuti vatongi vepasi rese vadzime bhangi vosunungura mari yako. Izvi ndizvo zvaizoitika kana iwe ukagovana bhangi pamwe nekuzvarwa patsva kwaOsama Bin Laden. Mabhangi haangobvunze matsamba ekucherekedza nekuti ndeeNosy. Ivo vanoda kuti iwe pamwe nevamwe vanoisa mari muve vakachengeteka. Zvakare, ivo havadi kurasikirwa nemarezinesi avo ekubhangi nekubvuma zvisina kunaka vakomana mugadziriro.
Chikonzero Nei Vasingaiti Zvimwe
Kuita zvese izvi kushingairira kwakaringana kunodiwa nenyika dzepasi rose hakusi kwemahara. Zvinoda mari. Saka, ndosaka kuvhura account kutsvagura kunosanganisira mari yekuseta. Iyo bhangi haisi kuzoisa mungozi yekurasikirwa nerezinesi yavo uye yega nzira yekushingairira nekuziva-yako-mutengi (KYC) mirau. Unogona kuti uri mukomana akanaka kana akanaka gal. Nekudaro, iyo bhangi haikuzive iwe. Saka, ivo vachazoda iwe kuti uzviratidze.
Iro bhangi harizopfuuri nemitemo nekuti unovadana nemoto kupfura mumuromo mako. Ivo havazoiti mutsauko nekuti iwe uri kusvetuka kumusoro uye pasi kunge mhezi inotsemuka nekuti ivo vari kutora refu kwazvo kana kubvunza ruzivo rwakawandisa. Maseneta emunharaunda anogara achiongorora bhangi. Ivo vanofanirwa kuve nechokwadi chekuti mabhangi akaongorora ese emabhokisi kune imwe neimwe setup account. Saka, usatarisira kuti Jehovha anokupa wink uye kugutsurira. Ndokunge, havazokurembedze mumusoro nekuti une usimbe zvikuru kuti utore pasipoti kana tsamba yekubhengi. Ivo havasi kuzoenda panjodzi yekurasikirwa nerezinesi rako iwe. Ivo vangatopfuurira kuenda kune iyo inotevera mutengi anoenda nechirongwa.
Offshore Banking Mari
Mari yemwedzi inogadziriswa inogona kumhanya kubva ku $ 20 kusvika ku $ 100, kana zvakadaro. Mari yekutumira waya inowanzobva ku $ 25 kusvika ku $ 75. Kana iwe uchida account paunogona kuchengetera mumusika wemasheya kune masangano kwaunogona kutengesera wega. Kune zvakare masangano kwaunogona kuve nemaneja maneja wemari kukuisira mari iwe, nekutendera kwako. Mamaneja emari anowanzo kubhadhara chidimbu chidiki chemari yavanobata. Nomuzvarirwo, mhando dzezvinodhurwa uye huwandu hwemutero hunosiyana siyana nesangano. Vanogona kunge vari mukati kana kunze kwemasera ataurwa pano.
Mari yemubhadharo yakabhadharwa pama deposits, mari inobhadharwa pamwedzi uye marudzi emaakaundi anosiyana Mazhinji masangano ekunze anowanikwa kumahombekombe ane makwikwi ekukwikwidza kuitira kuti vakwezere vanochengeta mari. Mari yemubhadharo yakabhadharwa kumahombekombe inowanzove yakakwira kupfuura masangano epamusha. Maitiro ekugadzira yako yekumahombekombe kubhengi account inosanganisira kugadzirisa mubhadharo wekutakura, wekutakura mutero uye mimwe mitengo midiki yekukanganisa Izvi zvinhu zvinogona kusanganisira zvinhu zvakadai semanificha icala, nezvimwe. OffshoreCompany.com yabatsira zviuru zvevanhu kuvhura zvakavanzika offshore account, makambani uye kuvimba. Saka, svikira isu uye isu tinogona kubatsira nezve izvo zvinodikanwa nhasi.
Tsvaga kuti chii chiri kutonga uye bhangi chakakukodzera zviri nyore. Ingoshandisa nhamba yacho kana fomu yekubvunza pamusoro uye tsanangura zvaunoda.
To chitsauko 11>